HTC U12 +: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
HTC U12 +: HTC ọhụrụ flagship bụ ugbu a ukara
Eder Ferreño | | HTC, Mobiles
N'ime izu ndị a niile Ọtụtụ nkọwa gbasara HTC U12 + na-agba agba, ohuru ohuru nke ndi na emeputa Taiwan. Mana n’ikpeazụ, taa ka ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na atọ, emeela ka ekwenti ekwenti. Anyị na-eche ọkọlọtọ ọhụụ nke ika ahụ ihu, nke na-atụ anya iji ngwaọrụ a nwetaghachị ụfọdụ ahịa na ahịa.
Dị ahụ ewepụtawo ihe kachasị mma na ngwaọrụ a, nke pụtara ìhè maka mma ya. HTC U12 + a bụ ekwentị dị ike, nke nwere ezigbo atụmatụ yana nke nwere igwe foto anọ zuru ezu. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịtụ anya site na njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ?
Ọ bụ ezie na HTC na-ewu ewu n'ahịa na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbapụ, ekwentị ha dị elu na-ewepụta ọtụtụ mmasị ọha mmadụ. Ọ bụ ezie na nkesa na-adịghị mma na ọnụ ahịa ya dị elu na-egwu megide ụdị. Anyị na-ahapụ gị na mbụ na nkọwa nke njedebe dị elu.
1 Nkọwapụta HTC U12 +
Nkọwapụta HTC U12 +
Dị ka anyị kwuru, anyị na-eche ihu ngwaọrụ dị mma, nke pụtara maka arụmọrụ ya dị mma. N'ihe banyere imewe, akara ahụ ahọrọla ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye ihe anyị na-ahụ n'ahịa taa, ịkụ nzọ na ihuenyo na okpokolo agba. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke HTC U12 +:
Ihuenyo: 6 sentimita asatọ Super LCD6 na FullHD + mkpebi 1440p x 2280p (537ppi) na 18: 9 HDR10 ruru
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 845
Nchekwa ime: 64GB / 128GB + microSD
Rear igwefoto: 12 MP f / 1.8 + 16 MP, f / 2.6, 2x ngwa anya mbugharị
Igwefoto n'ihu: 8 MP + 8 MP
Njikọ: 4G, WiFi, Dual SIM LTE, GPS
Batrị: 3.500 mAh na ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
ndị ọzọ: Mkpịsị aka na-agụ, IP68 mmiri na-eguzogide asambodo, Face Unlock
HTC U12 + ahọrọla ihe ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ na ya ụzọ, dị ka okpokolo agba, n'ihi Edge Sense 2 teknụzụ. Site na teknụzụ a, ekwentị nwere ike ịmata aka na-ejide ya n'oge ahụ. Ọzọkwa, a na-etinyekwa bọtịnụ nwere ike nrụpụta na ngwaọrụ a. Ọ na-egosiputa ọnụnọ dị ukwuu nke mmegharị ahụ na ekwentị, nke ga-eme ka onye ọrụ ahụ mepụta ụdị omume niile na ya.
Otu n’ime ihe ịtụnanya ga-atọ ọtụtụ ndị ụtọ bụ na a HTC U12 + nwere ihuenyo na-enweghị ọkwa. N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla ọtụtụ ekwentị nwere nkọwa a na ihuenyo. Mana ọ bụghị ndị ọrụ niile kwenyesiri ike. HTC adịghị adaba na amara ya ma tinye na ihuenyo na 18: 9.
N'etiti nkọwa ndị ọzọ nwere mmasị na ekwentị anyị na-ahụ nguzogide mmiri, nke na-aga n'ihu ịnweta ọnụnọ na mmeghe site na njirimara ihu. Teknụzụ nke na-emeri n'ahịa. Ọ na-egosiputa ọnụnọ nke onye inyeaka abụọ na HTC U12 + a. Na mgbakwunye na Google Assistant anyị nwere Alexa na United States na Baidu na China. A na-enweghị mmasị na nzọ na anyị ga-ahụ otú o si arụ ọrụ na omume.
Anyị na-achọta nsụgharị abụọ nke njedebe dị elu, dabere na ebe nchekwa ya. Otu nsụgharị nwere 64 GB nke ebe nchekwa na ndị ọzọ 128 GB. Nke abụọ nke nsụgharị O yiri ka n'oge ahụ ọ gaghị eru Europe. Mana ee United States, ebe ọ dịlarị maka ndoputa ya, yana ụdị ọzọ nke HTC U12 + a.
Ma na Europe ma na ụwa ndị ọzọ, ọkwa dị elu dịworị maka ntinye akwụkwọ. N'ihe banyere Spain anyị nwere ụdị ekwentị ahụ nwere 64 GB nke nchekwa dị. Ọnụahịa ya bụ euro 799. A elu price na nke ahụ nwere ike ịbụ ihe na-akwụsị ukwuu ahịa nke ngwaọrụ n'ụwa nile.
HTC U12 + a dị na agba atọ. Anyị ga-ahọrọ n'etiti a seramiiki nwa na agba, a ire ọkụ-acha ọbara ọbara ụda na n'ikpeazụ na-akpọ Translucent Blue. Ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ mmasị niile, n'ihi na ọ na-akụnye nha ihu na ọkara. N'ihi nke a ị nwere ike ịhụ akụkụ nke ekwentị. Betzọ nzọ dị ize ndụ na akụkụ nke ika ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC U12 +: HTC ọhụrụ flagship bụ ugbu a ukara
A ga-enyefe Vivo Apex na June 12
Emelitere ekwentị Razer na ọnọdụ eserese ọhụrụ